Unoda Kuva Wokutanga Nguva Dzose Here? Dzidzisa Vana Kuti Vabatsire Vamwe
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Krio Kwanyama Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Maya Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tatar Thai Tiv Tongan Tsonga Turkmen Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
PANE munhu waunoziva here anoda kuva wokutanga nguva dzose?— Anogona kusundira mumwe munhu kwakadaro uko kuti ave wokutanga pamutsetse. Wakambozviona zvichiitika here?— Mudzidzisi Mukuru akatoona vanhu vakuru vachiedza kutora nzvimbo yokutanga, kana kuti inokosha pane dzose. Uye haana kufara nazvo. Ngatione zvakaitika.
Wakamboona vanhu vachiedza kuva vokutanga here?
Bhaibheri rinotiudza kuti Jesu akakokwa kumutambo mukuru wezvokudya kumba kwomuFarise, uyo akanga ari mutungamiriri wepamusoro wechitendero. Jesu paakasvika, akatanga kutarisa vamwe vaenzi vachipinda uye vachisarudza zvigaro zvakanaka kupfuura zvose. Saka akataurira vaya vakanga vakokwa imwe nyaya. Unoda kuinzwa here?—
Jesu akati: ‘Kana mumwe munhu akakukokai kumutambo womuchato, musatora nzvimbo yakanaka kupfuura dzose, kana kuti inokosha kupfuura dzose.’ Unoziva here kuti nei Jesu akataura kudaro?— Akatsanangura kuti mumwe munhu aikosha kupinda ivo aigona kudaro akakokwawo. Saka sezvauri kuona pamufananidzo, muridzi womutambo anouya oti: ‘Rega munhu uyu agare panzvimbo yacho, uye iwe enda apo.’ Saka muenzi wacho aizonzwa sei?— Aizonyara nokuti vamwe vaenzi vose vaizomutarisa achidzika kuuya panzvimbo yakaderera.
Jesu akanga ari kuratidza kuti hazvina kunaka kuda nzvimbo yepamusoro kupfuura dzose. Saka akati: ‘Kana ukakokwa kumutambo womuchato, enda unogara pachigaro chepasi-pasi. Ipapo anenge akukoka anogona kuuya oti, “Shamwari, enda pakakwirira.” Zvino uchawana rukudzo pamberi pevamwe vaenzi vose sezvaunoenda panzvimbo iri nani.’—Ruka 14:1, 7-11.
Jesu akanga achidzidzisa chidzidzo chipi paakataura nezvevanotora zvigaro zvakanakisisa, kana kuti zvokutanga?
Wanzwisisa pfungwa yenyaya yaJesu here?— Ngatipe muenzaniso kuti tione kana wanzwisisa. Ngatitii uri kupinda mubhazi rakazara. Unofanira kumhanyira kuti uwane chigaro here worega munhu mukuru achimira mubhazi?— Jesu aizofara nazvo here kana ukadaro?—
Mumwe munhu angati chero zvataita Jesu haanei nazvo. Asi unobvumirana nazvo here?— Jesu paakanga ari pamutambo mukuru wezvokudya iwoyo pamusha womuFarise uya, akatarisa vanhu pavaisarudza pokugara. Haufungi here kuti achiri kufarirawo zvatinoita nhasi?— Zvino Jesu zvaatova kudenga, zvechokwadi ari panzvimbo yakanaka kuti atitarise.
Mumwe munhu paanoedza kuva wokutanga, zvinogona kukonzera zvinetso. Kazhinji panomuka nharo, uye vanhu vanotsamwa. Dzimwe nguva izvi zvinoitika apo vana vanokwira vose bhazi. Panongovhurwa dhoo rebhazi, vana vanomhanya kuti vave vokutanga. Vanoda zvigaro zvakanaka kupfuura zvose, zviri pedyo nemahwindo. Saka chii chingaitika?— Hungu, vanogona kupopotedzana.
Kuda kuva wokutanga kunogona kukonzera zvinetso zvakawanda. Kwakatomutsa zvinetso pakati pevaapostora vaJesu. Sezvatakadzidza muchitsauko 6 chebhuku rino, vakaitisana nharo dzokuti ndiani aiva mukuru. Saka Jesu akaitei?— Hungu, akavaruramisa. Asi gare gare vakaitisanazve dzimwe nharo. Ngatione kuti dzakatanga sei.
Vaapostora pamwe chete nevamwe, vari kufamba naJesu kokupedzisira vachienda kuguta reJerusarema. Jesu ave achitaura navo nezvoUmambo hwake, naizvozvo Jakobho naJohani vave vachifunga pamusoro pokutonga samadzimambo pamwe naye. Vatombozvitaura naamai vavo Saromi. (Mateu 27:56; Mako 15:40) Saka vari munzira kuenda kuJerusarema, Saromi anouya kuna Jesu, anopfugama pamberi pake, achiti ane chikumbiro.
“Munodei?” Jesu anobvunza. Anopindura kuti anoda kuti Jesu aite kuti vanakomana vake vagare pedyo naye muUmambo hwake, mumwe kurudyi rwake uye mumwe kuruboshwe. Zvino vamwe vaapostora gumi pavanoziva izvo Jakobho naJohani vakaita kuti amai vavo vakumbire, unofunga kuti vanonzwa sei?—
Saromi anokumbirei kuna Jesu, uye Jesu anozoti kudii?
Zvechokwadi, vanogumbukira Jakobho naJohani. Naizvozvo Jesu anopa vaapostora vake vose zano rakanaka. Jesu anovaudza kuti vatongi vemarudzi vanofarira kuva vakuru uye vanokosha. Vanoda kuva nenzvimbo yepamusoro yokuti munhu wose avateerere. Asi Jesu anoudza vateveri vake kuti havafaniri kuva vakadaro. Pane kudaro, Jesu anoti: “Munhu wose anoda kuva wokutanga pakati penyu anofanira kuva muranda wenyu.” Pafunge!—Mateu 20:20-28.
Unoziva zvinoita muranda here?— Anoshandira vamwe vanhu, asingatarisiri vamwe kumushandira. Anotora nzvimbo yakaderera pane dzose, kwete nzvimbo yokutanga. Anoita somunhu akaderera pane vose, kwete anokosha kupfuura vose. Uye yeuka, Jesu akataura kuti munhu anoda kuva wokutanga anofanira kuita somuranda kune vamwe.
Zvino unofunga izvozvo zvinorevei kwatiri?— Muranda angaitisana nharo natenzi wake here kuti ndiani achatora chigaro chakanaka? Kana kuti angaita nharo here pamusoro pokuti ndiani achatanga kudya? Unofungei?— Jesu akatsanangura kuti muranda anoisa tenzi wake mberi nguva dzose.—Ruka 17:7-10.
Saka pane kuedza kuva wokutanga, tinofanira kuitei?— Tinofanira kuva sevaranda kune vamwe. Uye izvozvo zvinoreva kuisa vamwe mberi kwedu. Zvinoreva kuona vamwe sevanokosha kutipfuura. Ungafunga nezvenzira dzaungaisa nadzo vamwe pokutanga here?— Wadii kudzokera kupeji 40 ne41 wotarira zvakare dzimwe nzira dzaunogona kuisa nadzo vamwe pokutanga nokuvaitira zvinhu zvakanaka.
Uchayeuka kuti Mudzidzisi Mukuru akaisa vamwe mberi kwake nokuvaitira zvinhu zvakanaka. Manheru okupedzisira ane vaapostora vake, akatopfugama ndokugeza tsoka dzavo. Kana tikaisa vamwe pokutanga nokuvaitira zvinhu zvakanaka, tichave tichifadza Mudzidzisi Mukuru naBaba vake, Jehovha Mwari.
Ngativerenge mamwe magwaro eBhaibheri anotikurudzira kuisa vamwe mberi kwedu pachedu: Ruka 9:48; VaRoma 12:3; naVaFiripi 2:3, 4.
Iva Nomutsa Uye Usanyima Vamwe
Unogona Kuva Nemwoyo Murefu!